Pyithu Hluttaw Deputy Speaker separately receives PRC Ambassador, IDEA Myanmar head | Pyithu Hluttaw
(ခ)-စေတုတ္တရာမြို့၌ ဆီမီးချောင်းရေတိုက်စားနစ်မြုပ်မှုမှ ကာကွယ်ရန်အတွက် ရေကာတာတည်ဆောက် ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
(ဂ) ရေစီးရေလာကောင်းမွန်သော ချောင်း၊ မြောင်းများကို မြေဖို့ကျူးကျော်ပြီးအကွက်ချရောင်းချခြင်းကြောင့် အရင်းအမြစ် များ ပျောက်ဆုံးသွားနိုင်သည့်ဘေးမှ ထိန်းသိမ်းပေးရန်နှင့် ကျူးကျော်သူများကိုမည်သို့ထိရောက်စွာ အရေးယူ မည်တို့သိလိုခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့်‌မေးခွန်း
(က)-ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ မော်ချီးဒေသ၊ လိုခါးလိုကွက်သစ်အမှတ်(၃)လုပ်ကွက်အတွင်းရှိ သတ္တုကျင်း များကို အရေးပေါ်အမြန်ဆုံးပိတ်သိမ်းပေးရန်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
Pyithu Hluttaw Deputy Speaker separately receives PRC Ambassador, IDEA Myanmar head
Pyithu Hluttaw Deputy Speaker U Tun Tun Hein received Ambassador of the People’s Republic of China (PRC) to Myanmar Mr. Hong Liang yesterday afternoon at the Deputy Speaker’s office in Nay Pyi Taw.
At the meeting, matters relating to promoting friendship and cooperation between the parliaments of the two countries, Hluttaw legislative and Hluttaw affairs works, internal peace, national reconciliation and regional development were discussed and views exchanged.
Similarly, Pyithu Hluttaw Deputy Speaker and Chairman of Joint Coordination Committee (JCC) on Hluttaw Development received International IDEA Myanmar office head Mr. McDowell later at the deputy speaker’s office.
During this meeting International IDEA providing states/regions Hluttaws and Hluttaw representatives information on constitutional matters and increasing support in legislative works, assist in successfully conducting courses and workshops on basic requirements for Myanmar becomingafederal nation were discussed and views exchanged.